Andro: 1 mey 2020
IETT dia hikarakara fanentanana 3 ho an'ireo matihanina ara-pahasalamana amin'ny fameperana 105 andro
Ho ampahany amin'ny fepetra noraisina noho ny valan'aretina Covid-19, ny curfew dia hampiharina amin'ny tanàna metropolitan 30 sy Zonguldak anio ary amin'ny faran'ny herinandro. Mba hahazoana antoka fa ny olan'ireo mpiasan'ny fahasalamana eo amin'ny IMM dia tsy misy olana amin'ny fiatrehana sy mankany amin'ny asa [More ...]
Olona dimy tapitrisa no afaka haka roa taona izay tsy hifarana raha tsy misy Corona
Olona dimy tapitrisa no afaka mandray roa taona izay tsy hijanona raha tsy misy Corona; Nilaza ny manam-pahaizana fa ny areti-mifindra covid-19 dia mety maharitra hatramin'ny roa taona, ary ny ampahatelon'ny mponina eto dia tsy hifarana raha tsy ahazoana tsimatimanota. [More ...]
Fanairana Coronavirus ao amin'ny tafika rosianina
Raha ny fanambarana nataon'ny Rosiana Tafika Rosiana, dia nahatratra 19 hatramin'izao ny isan'ireo miaramila niatrika ny fanandramana COVID-901. Tamin'ity fanambarana ity dia miaramila 19 avy amin'ny 324 izay niatrika ny fanadinana COVID-176 no naiditra hopitaly eo ambanin'ny Ministeran'ny Fiarovana an'i Russia. [More ...]
Vehivavy KBRN Reconnaissance an'ny Autonomous Unmaned izay tsy azo avy ao HAVELSAN
Torkia teknolojia orinasa lehibe indrindra hita ao amin'ny iray amin'ireo toerana HAVELSAN, manohy ny asa mba hanana firenena sy ny teknolojia an-toerana an'i CBRN fandrahonana. Tiorkia Simika voalohany, biolojika, Taratra sy nokleary (CBRN) Fiarovana [More ...]
Arahabaina ny andron'ny asa, 1 Mey, Andro fitaterana lamasinina sy firaisan-kina
Manantena ny hiverenana amin'ireny andro ireny dia tsy tsaroanay; izy ireo no tena mahery fo amin'ny lalamby mpiasa mandray andro aman'alina ho an'ny Torkia! Tianay ny misaotra an'ireo mpiasan'ny lalamby izay nanamafy ny herinay nandritra ny 164 taona, ary ireo mpiasa rehetra ao [More ...]
Baku Tbilisi Kars Railway dia tokony ampiasaina bebe kokoa
Tiorka ny minisitry ny fitaterana Tiorka nandritra ny valan-tsarimihetsika, Baku-Tbilisi-Kars ny lalamby izay tokony ho mavitrika kokoa ny lalamby fitaterana samihafa, manomboka amin'ny tashkent ka hatramin'ny voalohany, ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa [More ...]
Manomboka ny famerenana amin'ny laoniny ny tranoben'ny tantara Kırklareli
Famerenan'ny laoniny ho an'ny fananganana toby ara-tantara, izay nanomezan'ny governora an'i Kırklareli Osman Bilgin ny vaovao tsara fa hosokafana ho kolontsaina sy trano fisotroana io tato anatin'ny volana vitsivitsy. Governemanta Bilgin dia malaina nandritra ny taona maro teo amin'ny tranoben'ny tantara teo afovoan-tanàna. [More ...]
Başakşehir Kayaşehir Metro Line dia ho vitan'ny ministera!
Ny minisiteran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa no hanatanteraka ny fanamboarana ny zotra metro Başakşehir-Kayaşehir eo amin'ny lalan'ny hopitaly Istanbul Başakşehir, izay no voalohany any Eropa miaraka amin'ny fomban'ny fandriana marary matanjaka indrindra. City Rail [More ...]
Any Norvezy, eo amin'ny ambaratonga iray, ny lamasinina no manafika kamio iray kamiao
Kamiao iray nitondra kamiao teo amin'ilay tranofiara tao Skien, Norvezy, no nifanitsaka tamin'ny ambaratonga ambony noho ny antony tsy fantatra. Ny sakana tsy fitoviana amin'ny làlan-kaleha dia mihidy ao amin'ny TIR, izay tsy afaka mivoaka ny sakamba, ary avy eo [More ...]
Mask mizara ireo mpivarotra manome ny serivisy fitateram-bahoaka any Van
Ny Distrikan'ny Van Metropolitan no nandoto ny fiarany tamin'ny fizarana mason-drà tamin'ny minibus taxi sy ny mpivarotra bus bus tsy miankina izay manome serivisy fitateram-bahoaka any an-tanàna ao anatin'ireo fepetra raisina. Ny valanaretina coronavirus, misy fiantraikany amin'ny tontolo iray [More ...]
Masky misy Shield no nozaraina tamin'ireo mpivarotra tany Ordu
Ordu Metropolitan Municipality, izay manatanteraka ny asany amin'ny faritany manerana ny faritany noho ny areti-mifindra, dia mitandrina hatrany ny fepetra rehetra amin'ny sehatra rehetra. Amin'izany toe-javatra izany, ny kaominina Metropolitan dia mampiasa fiara fitateram-bahoaka izay ampiasain'ny mponina betsaka. [More ...]
Fanambarana momba ny ala ao Atatürk avy amin'i Imamoglu ..!
Ny Ben'ny tanànan'i Metropolitan Istanbul Ekrem İmamoğlu dia nanao famotopotorana tao amin'ny Hacıosman Grove, izay novana ny anarany hoe "Alan'i City Atatürk" taorian'ny fandaharana natao. Nilaza i İmamoğlu fa manakaiky ny fitaterana metro izy io. [More ...]
Ho vita amin'ny faran'ny taona 2020 ny làlambe marmara Avaratra
Karaismailoğlu, izay nandinika ny toeram-panorenana tany amin'ny distrikan Akyazı tamin'ny fizarana faha-6 amin'ny Avaratr'i Marmara Avaratra, dia nilaza tamin'ireo mpanao gazety fa ny halavan'ny làlan-kianjan'ny 6-faritra dia 400 kilometatra. Ny minisitra Karaismailoğlu, 73 [More ...]
Museum Railway İzmir
Ilay tranom-boaloboky ny tanimboaloboky ny biraon'i Alsancak, iray amin'ny vakoka ara-kolontsaina manan-danja ao İzmir, no fonenan'ny tranombakoka ankehitriny. Izmir TCDD Museum sy ny Art Gallery, izay hihaonan'ny vavolombelon'ny tantara anao, dia ny fahatsiarovana ny lalamby any Anatolia [More ...]
Çamlık Steam Locomotive Museum na Çamlık Railway Museum dia tranombakoka lalamby an-tsokosoko malalaka izay hita ao amin'ny tanàna Çamlık ao amin'ny distrikan'i Selçuk ao Izmir. ny lehibe indrindra dia ny tranom-bakoka lehibe indrindra lalamby sy ny tranom-bakoka rakitra any Eoropa any Torkia [More ...]
Kambo sy boulevards miomana amin'ny fahavaratra any Eskisehir
Manohy ny fanamboaran-dàlana, ny fikojakojana ary ny fanamboarana ny asan'ny foiben-tanàna sy any ambanivohitra miaraka amin'ny fiakaran'ny toetr'andro, kaominina ao Eskişehir Metropolitan, raha manamboatra ny lalana simba amin'ny ririnina any ambanivohitra, aza miala any an-tanàna. [More ...]
Ny fonosana ara-pahasalamana dia zaraina amin'ny jiro fifamoivoizana any Mersin
Ny Distrikan'ny Mersin Metropolitan dia manohy manaparitaka ireo fonosana ara-pahasalamana ho an'ny olom-pirenena mandritra ny fipoahan'ny coronavirus. Ny fonosana ara-pahasalamana nomanina ao anatin'ny tanànan'ny metropolitan dia tsy ampiharina amin'ireo mpandeha amin'ny fiara mandritra ny herinandro rehefa tsy ampiharina ny curfew. [More ...]
Arabia Saodita mba hamoaka basy Tiorka hatramin'ny 2021
Tao amin'ny fanambarana tao amin'ny kaonty Twitter momba ny Dirte générale générale de l'Église of the Kingdom of Saudi Arabia (GAMI), dia nambara fa nanomboka ny fandinihana ny fampandrosoana sy ny fanamboarana rafitra fiaramanidina tsy mitantana. Ao anatin'ny fanambarana natao, ny alimanaka tetikasa [More ...]
Famandrihana fampitandremana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy ho an'ny Akçaray kamiao sy fiara fitaterana
TransportationPark, sampana iray ao amin'ny kaominina Kocaeli Metropolitan, dia nametraka marika fampitandremana ara-tsosialy lavitra amin'ny fiara fitateram-bahoaka sy lakana rehetra. Amin'ny fampiharana ity dia tarihan'ny mpandeha mitondra fitaterana mahomby izay misy fahaiza-manao ambany amin'ny fiara fitaterana sy ny tram. ALL [More ...]
Eurasia Airshow 2020 Fiarovana Tafaverina ny volana Desambra
Tiorkia fiaramanidina fampirantiana voalohany, miorina amin'ny fampisehoana sidina Eurasia Airshow 2020 dia natao tao Antalya International Airport 2-6 Desambra 2020 amin'ny daty. Ny fair, izay kasaina natao hotontosaina ny volana aprily dia voatery nahemotra noho ny zotram-pandrefesana. ara-drariny [More ...]
Niverina tany Ankara ny fiaramanidina fiaramanidina mivezivezy any Etazonia
Tao anatin'ilay fanambarana nataon'ny Minisiteran'ny Fiarovam-pirenena dia nampahatsiahivina fa ilay fiaramanidina, izay nomanin'ny torolalana ny filoha Recep Tayyip Erdoğan, izay nitondra ny vondrona fitsaboana ara-pahasalamana voalohany ampiasaina amin'ny ady amin'ny valan'aretina 'Covid-19', dia niala tao Ankara tamin'ny 2 maraina 10.00 andro lasa izay. [More ...]
Minisitra vadiny, izay nanazava Torkia ny hiady amin'ny Covidien-19
Tale jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fahasalamana (WHO). Mandritra ny fivoriana fampahalalana, tarihan'i Tedros Ghebreyesus, minisitry ny fahasalamana Dr. Fahrettin Koca, nilaza Torkia ny ady amin'ny Covidien-19. Nentina tamin'ny fihaonambe horonantsary sy manerana an'izao tontolo izao [More ...]
Mahomby amin'ny ady amin'ny Coronavirus ao amin'ny toeram-piasana
Ny minisiteran'ny fianakaviana, ny asa ary ny asa soa ara-tsosialy dia manohy ny ezaka hataony amin'ny fiantohana ny fiainana miasa salama sy azo antoka amin'ny fizotran'ny COVID-19. Minisitry ny loza mety ho hita amin'ny fotoana voalohany ny valan'aretina ao Torkia, ialohavan'ny ny orinasa mba ho bebe kokoa [More ...]
Goavambe Goavana alohan'ny 3-Day Curfew!
3 andro mialoha ny fameperana tonga tao an-arabe, Minisitry ny Atitany, Tale Jeneraly ny Fiarovana, Gendarmerie General Mandidia sy Coast Mpiambina Mandidia ekipa manerana ny firenena ny fandraisana anjara ny 15: 00-24: 00 eo ny ora maro niara Torkia Peace Trust [More ...]
Ny governoran'i Karabük Fuat Gürel dia nandinika ny foto-drafitrasa sy fanitaran-dàlana natombok'ireo ekipa mpitantana isam-paritany amin'ny lalana mankany Keltepe Ski Center ary nahazo fampahalalana avy amin'ny manampahefana. Ho ampiasaina amin'ny fotodrafitrasa sy ny asa fanitarana ny lalana [More ...]